Parque de la Memoria - Parque de la Memoria - Buenos Aires
Amerika Atsimo Arzantina Buenos Aires
Adiresy: Int. Güiraldes 22, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Arzantina
Tel: +54 11 4787-0999
Fotoana misokatra: 10: 00-18: 00 - faran'ny herinandro, 10: 00-19: 00 - ny faran'ny herinandro
Saran'ny fitsidihana: maimaim-poana
Ao amin'ny tantaran'ny firenena tsirairay dia misy hetsika toy izany izay tsy misy olona mirehareha. Nefa ny fahafatesan'ny olona tsy manan-tsiny dia mitoetra foana ao anatin'ny fahatsiarovana ny vahoaka. Ny nenina sy ny hetaheta fanavotana dia mahatsiaro ny fahadisoan'ny lasa. Tsy nanjary niavaka tamin'izany i Arzantina . Izy io dia tamin'ny fananganana ny taranany, mba hisorohana ny fampihorohoroana ho faty amin'ny ho avy, ary ny Fikambanana Memory ao Buenos Aires dia natsangana.
Inona no atao hoe Memory Park?
Ao amin'ny Reniranon'i La Plata, ao amin'ny faritr'i Belgrano, misy habaka 14 hektara izay tsy mahafinaritra akory ny fahafinaretana. Mahatsiaro sy mitomany ireo tsy manan-tsiny ireo "adin-doko maloto" any Arzantina, izay nitranga nanomboka tamin'ny 1976 ka hatramin'ny 1983. Avy eo, olona tsotra an'arivony maro no maty vokatry ny fampihorohoroana.
Ambany dia ny seranam-piaramanidin'ny tafika, izay nandefasana ny "fitsangatsanganana fahafatesana", rehefa tsy nahatsiaro ny barbiturates ny olona ary nipoitra teny amin'ny ilan'ny fiaramanidina tao anaty rano. Ny reniranon'i La Plata eto dia midika koa ny lanjany an'ohatra, satria nanjary fitaovana izay nahatonga olona an'arivony tsy manan-tsiny.
Ny Memory Park dia foto-kevitra iombonana, ary ny fotony dia ny hanome voninahitra ny fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny fampihorohoroana fanjakana. Ao an-afovoany dia misy tsangambato fahatsiarovana - solaitra betobika efatra, izay misy fonosam-panafody 30.000 amin'ny anaran'ireo niharam-boina. Voatendry araka ny fandehan'ny fotoana izy ireo, ary ankoatra ny anarana, mitondra fampahalalana momba ny vanim-potoana, manondro ny taonan'ny famonoana, ary raha misy ny vehivavy sasany - ny maha-bevohoka azy.
Ankoatra ny tsangambato fahatsiarovana dia misy tsangambato 18 ao amin'ny Park Memory. Izy ireo amin'ny endrika iray na hafa dia manohana ny loha-hevitra fototra amin'ny tsangambato. Ny iray amin'ireo sary sokitra dia mivantana mivantana any amin'ny ranon'ny renirano, mampiseho ny fanantenana sy ny tsy finoana.
Ny studio ao Baudizzone-Lestard dia niasa tamin'ny endrika sy ny rafitr'ilay valan-javaboary. Ny fanapahan-kevitr'izy ireo voalohany momba ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahitana dia mamela ny fahatsapana ny ratra misokatra amin'ny vatana eto an-tany, izay azo antoka fa manamafy ny rivotra.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny Park of Memory?
Eo akaikin'ny valan-javaboary dia misy bisy fiarandalamby Intendente Güiraldes 22, izay nandalovan'ny lalana 33A, 33B, 33C, 33D. Ny fiantsonana metro akaiky indrindra dia Congreso de Tucumán.
Ho an'ireo mpitsidika dia misokatra isan'andro ny Park Memory. Ny ora fiasan-dry zareo dia fehezina amin'ny 10:00 hatramin'ny 18:00 amin'ny andavanandro, ary amin'ny 10:00 hatramin'ny 19:00 amin'ny faran'ny herinandro. Ny fidirana dia afaka. Etsy andaniny, ny asabotsy sy alahady amin'ny 11.00 sy amin'ny 16.00 dia misy ny fandaharam-potoana fitarihana amin'ny teny Espaniola. Ankoatr'izay, ny Park of Memory dia matetika ahitana fampirantiana sy hetsika samihafa natao hanintonana ny sain'ny besinimaro.
Tsangambato ho an'i Taras Shevchenko
Fitaovana ho an'ny fanitarana volo
Top-kintana TOP-10 amin'ireo legioma sexiest
Tahotra ny lavaka - aphobie na aretina ary ahoana no fomba hanafoanana izany?
Sage amin'ny volo
Inona no mila fahasambarana?
Sarah Rei dia nampiseho akanjom-borona tsy manan-danja tamin'ny famoahana ny kirarony
Tainkintana ny kisoa amin'ny vodka
Sakafo ao anaty vilany
Ahoana no fomba handravahana mofomamy ao an-trano?
Pear "Duchesse" - famaritana ny karazana vary
Ahoana no ahitanao akanjo marevaka amin'ny tananao?
Vehiana ho an'ny ankizy
Seza pesta miaraka amin'ny pataloha
Io saka tsy misy tahotra io no namonjy ilay zazalahy kely!
Edema ao amin'ny atidoha - soritr'aretina
Sakafo miaraka amin'ny strawberries